Mosquito ava muimbi | Kwayedza
Mosquito ava muimbi
22 Mar, 2019 - 00:03	 2019-03-21T18:54:58+00:00 2019-03-22T00:05:03+00:00 0 Views
Alfonso ‘Mosquito’ Zvenyika (kuruboshwe) ari mustudio
ZVENYIKA “Mosquito” Alfonso – uyo aimbove shasha yemutambo wetsiva – anoti ave kuita zvemimhanzi uye akatoburitsa kambo kake katsva kemusambo weAfro-Jazz ako anotarisira kuti kachafadza vatsigiri vake.
Muhurukuro neKwayedza, Mosquito (43) anoti akadzidzira zvemimhanzi apo aive mujeri makore adarika achipikira mhosva yekuba redhiyo.
“Ndakasungwa nemhosva yekupaza nekuba ndikapihwa chirango chekupika mwedzi makumi maviri. Panguva iyi ndipo pandakadzidza kuimba nekuridza, izvo zvazondituma kuburitsa kangu kambo kanonzi Kuda,” anodaro.
Anoti akanyora oga kambo aka ako kanotaura nezverudo.
“Kambo aka ndeke murume anombotanga achinetsana nemudzimai waanenge achida, vozoguma vave kugara vose vachiwirirana zvikuru,” anodaro.
Muchinda uyu anoti anotarisira kusvika kure munyaya dzemimhanzi.
“Musambo wandiri kuimba unodaidzwa kuti Afro-Jazz Fusion, ndinotenda mukomana akandibatsira kuimba nekuita zvimwe, Adex Ozones (28),” anodaro.
Anoenderera mberi achiti, “Vhidhiyo rekambo aka takatopedza kugadzira kare, richabuda mukupera kwemwedzi uno (Kurume) uye nditinotarisira kuti richatambirwa zvakanaka neveruzhinji.”
Mosquito anoti ari kuimba nechikwata chinodaidzwa kuti Mosquito Special Band uye anotarisira kuzotora vamwe vechidiki vane chipo munyaya dzekuimba achisimudzira matarenda avo.
Anotizve kunze kwekuita zvemimhanzi, ave nemagwaro ekudzidzisa mutambo wetsviva.
“Ndakatanga zvetsiva mugore ra1986 ndokuwana menduru dzinosanganisira yeCommonwealth, Africa Zone 6, Zimbabwean Champion, Buntum Weight neFly Weight uye iye zvino ndava nematsamba ekudzidzisa mutambo wetsiva ayo ndakapihwa neveZimbabwe Boxing Control Board,” anodaro.